खाना रातको समयमा खाँदैनन्: यी चीजहरू रातमा पनि खानु हुँदैन, आजदेखि होशियार रहनुहोस्!
कुन खाना रातमा खाँदैन: प्राय: हामी खानाको बारेमा समयको ख्याल राख्दैनौं र न त हामी जान्दछौं कुन समयमा खानु हुँदैन। धेरै मानिसहरूले यो पनि प्रश्न गर्छन् कि रातमा के खानु हुँदैन?
Nepal Online Patrika: कुन खाना रातमा खाँदैन: प्राय: हामी खानाको बारेमा समयको ख्याल राख्दैनौं र न त हामी जान्दछौं कुन समयमा खानु हुँदैन। धेरै मानिसहरूले यो पनि प्रश्न गर्छन् कि रातमा के खानु हुँदैन? (रातमा के खानु हुँदैन?) आयुर्वेदले खाने र पिउनेसँग सम्बन्धित धेरै चीजहरूको बयान गरेको छ जुन पालन नगर्दाका कारण धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
कुन खाना रातमा खाँदैन: प्राय: हामी खानामा समयको ख्याल राख्दैनौं र कुन समयमा के खान हुँदैन भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यहाँ खाने र पिउने सम्बन्धमा आयुर्वेदमा धेरै चीजहरू छन् जुन पालना नगर्दा धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। हामीले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने दृष्टिकोणबाट खाना खाने ध्यान राख्नु पर्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन रातको समयमा खान हुँदैन। बेलुकाको खानासँग सम्बन्धित केही चीजहरू आयुर्वेदमा पनि उल्लेख गरिएको छ। कुन खानामा समावेश गर्नु हुँदैन। स्वस्थ खाना स्वस्थ हुन आवश्यक छ। सबैले सधैं राती प्रकाश खानुपर्दछ, तर कसैलाई के थाहा हुँदैन के रातमा के खानु हुँदैन? (कुन खाना रातमा खाँदैन) यहाँ, जान्नुहोस् कुन चीजहरू रातमा पनि खानु हुँदैन …
राती यी चीजहरूको सेवन नगर्नुहोस्। राती यी चीजहरूको उपभोग नगर्नुहोस्:
– खानामा धेरै तेल र मसलादार खाना तपाईंको पाचन बिग्रन सक्छ। बेलुकाको खानामा यस्तो मसला प्रयोग गर्नुहोस् जुन स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। कहिलेकाँही मसलाको संयोजनले स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्न सक्छ। तपाईं खानामा दालचिनी, सौंफ, मेथी र इलायची समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
– क्याफिन रातमा सेवन गर्नु हुँदैन। चिया जस्तै, कफी वा डार्क चकलेट पनि खान हुँदैन। किनकि यसले क्याफिनका साथै अन्य पदार्थहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको दिमागलाई सक्रिय राख्छ र तपाईं निद्रासँग संघर्ष गर्न सक्नुहुनेछ|
– तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि दही रातमा खानु हुँदैन। दहीले शरीरमा कफ समस्या बढाउन सक्दछ, जसको कारणले नाकमा बलगम गठनको अधिकता हुन सक्छ। यससँगै, यसले जोर्नीहरूमा सूजन र दुखाइ बढाउन सक्छ।
– राम्रा पीठोले बनेका चीजहरू रातमा खानु हुँदैन। पीठोमा धेरै नै क्यालोरी सामग्री हुन्छ। यदि रातमा सुत्नु अघि तपाईं पराठा साबुनको रोटी वा मैदाबाट बनेको पिज्जा खानुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरीरमा अतिरिक्त फ्याट जम्मा गर्न थाल्छ र यसलाई पचाउन गाह्रो हुन सक्छ।
– रातमा उच्च फ्याटको दुध सेवन नगर्नुहोस्। साथै, यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि चिसो दूध पिएन, सधैं यसलाई उमालेर पिएर। तातो दुध र कम फ्याट दुध पचाउन सजिलो छ।
– यदि तपाईं वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसपछि यस गांठलाई रातमा कम खानको लागि बाँध्नुहोस् र यसलाई चबाउनुहोस् र यसलाई खानुहोस्। यसबाट तपाईं स्वस्थ हुनुहुनेछ र निद्रा पनि राम्रो हुनेछ। हाम्रो पाचन प्रणाली रातमा निष्क्रिय छ, जसले हाम्रो शरीरलाई भारी खाना पचाउन मुश्किल गर्दछ।
राशिफल30 mins ago